Ganacsiga Suuqgeynta Beddelka ah | Martech Zone
Ganacsi ku-beddelasho Ganacsi Beddel ah
Talaado, Maarso 19, 2013 Talaado, September 17, 2013 Douglas Karr
Mid ka mid ah fursadaha Ganacsi ee Ganacsi (B2B) suuqleyda ayaa ah in la qabto taraafikada dadka raadinaya waxyaabo kale. Dadku waxay baarayaan iibsashada dalabka ama kuma faraxsana waxayna rabaan inay ka tagaan iibiye - iyagoo adeegsanaya ereyo sida ku beddelan, ama la mid ah, ama codsiyada sida si loo sharaxo raadintooda.
Waa kuwan tusaale fiican - raadin beddelka Wufoo:
Formstack ayaa ka faa'iideystay fursadan raadinta iyagoo dhisaya an Bog aad u fiican oo sharraxaya madaxa ilaa madaxa faa'iidooyinka isticmaalkaQalabaynta dul Wufoo. Iyo, dabcan, maadaama boggu aad u khuseeyo waxay ku qiimeeyaan heer aad u sarreeya. Waxaan ku dhiirigelin lahaa suuqley kasta inuu daabaco bogag gudaha ah oo isbarbar dhigaya iskuna barbardhigaya codsiyadooda iyo tartankooda. Caddaalad uun noqo si aan dabadaada laguu soo dhiibin! 🙂
Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira dhowr buug hage oo halkaas jooga si loo hubiyo inaad liis garaysantahay:
bedelkeeda - Diiwaan weyn oo ka mid ah softiweer kale oo leh qiimeyn heer sare ah oo leh matoorada raadinta (in kasta oo aan ka helo qiimeynta dalabka iyo natiijooyinka inta badan sax ahayn)
Serchen - mashiin raadin raadinta codsiyada daruurta… waxaa ku jira dib u eegis.
GetApp - barta dib u eegista softiweerka ganacsiga si loo helo codsiyada.
dheeraad ah - bog hage ah oo laga helo degello isku mid ah. Tan waxaa sidoo kale ku jira daruur iyo Software sida codsiyada Adeegga.
Bogga la midka ahSearch - bog kale oo hage ah oo laga helo degello isku mid ah. Tan waxaa sidoo kale ku jira daruur iyo Software sida codsiyada Adeegga.
Hubso inaad ka faa'iideysato raadintaan markaad kobcinayso ganacsigaaga cusub. Dhis boggag gudaha ah oo aad ufiican oo kor u qaadaya codsiyadaada kuwa kula tartamaya. Waxaan u dhisi lahaa bog mid kasta oo ka mid ah tartamayaasha ugu sarreeya. Intaa waxaa sii dheer, hubso inaad sameyso codsiyadaada waxay ku taxan yihiin matoorada raadinta beddelka ah iyo tilmaamaha. Ma heshay hageyaal kale oo aad kugula talin lahayd? Ku dar iyaga faallooyinka!
Tags: software kaleku beddelanmatoorada raadinta barnaamijkabaaritaanka codsiyadab2bbeddelka b2bla mid ah
Dhacdada Google: Horayba Caqli Baad u Tahay Sidaad U Malaynayso